तिहारको मनोवैज्ञानिक पक्ष र महत्व, मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव - टाकुरा न्युज
तिहारको मनोवैज्ञानिक पक्ष र महत्व, मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव
by गोपाल ढकाल, मनोविद
बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, चाडपर्व, रहनसहन लगायतका प्राय सबै क्षेत्रमा परेको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण यस बर्षको तिहार पनि खुलेर हर्षोल्लासका साथ मनाउन सकिरहेका छैनौँ ।
तर, यो विषम् परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई भने जोगाउनु पर्छ । यो वर्ष कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यान दिदैँ भौतिक दूरी कायर गरेर सुरक्षाका उपायहरु अपनाउँदै जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट चाडपर्व मनाउनु नै उत्तम हुन्छ।
चाडपर्वमा शुभकामना तथा आशीर्वादको आदन–प्रदान भौतिक रुपमा भेटघाट हुन नसकेपनि बैकल्पिक रुपमा फोन वा सोसियल मिडियाको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ ।
चाडपर्वको धार्मिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। दशैँ तिहार जस्ता महत्वका चाडपर्वहरुलाई कुनै जात, जाती र धर्म सम्प्रदायसँग मात्र सीमित नबनाई परम्परा र संस्कृतिका रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ। यस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वहरूले नेपालीहरुमा राष्ट्रिय एकता, शान्ति र सद्भाव कायम राख्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ, साथै नेपाली हुनुको गौरब र पहिचान गराउँछ ।
तिहारमा खेलिने देउसीभैलोले एक त सामूहिक भावनको विकास गर्छ भने अर्कोतर्फ गीत संगीतको माध्यमद्वारा मनोरञ्जन समेत प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको लागि मनोरञ्जन महत्वपूर्ण हुन्छ । मनोरञ्जनले पिर, मर्का र तनावबाट छुटकारा मिल्छ । गीतसंगीत मानव जीवनको लागि आवश्यक कुरा हो । विश्वमा मानसिक रोगको उपचारको लागि म्यूजिक थेरापी कै विकास भएको छ ।
चेलीहरू बिवाह गरी अर्काको घरमा जाने भएकाले दाजुभाइ र दिदी बहिनीबीचको सम्बन्ध टाढा हुँदै जानसक्ने सम्भावना धेरै हुने हुँदा माइती र चेली बीचको सम्बन्ध गाढा बनाइ राख्न तिहार जस्तो चाडको ठूलो महत्व छ ।
विवाह गरेर टाढाटाढा गएका दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको भेट तिहारको अबसरमा हुने हुँदा सम्बन्धमा पुनर्ताजकी आउने गर्छ । उनीहरुबीच माया प्रेम सद्भाव अझ् झाँगिदै जान्छ । घर छोडेर विदेशिएका वा टाढा परदेश गएका परिवारका सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सेतुको काम पनि चाडपर्वले गर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि चाडपर्वले थेरापीकै काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण चाडपर्वको मनोवैज्ञानिनिक प्रभाव बुझ्नु जरुरी छ ।
संसारका सबै प्राणीहरूले आफ्नो मान , सम्मान र कामको कदर होस भन्ने चाहन्छन् । तिहारको बेला पशुपँक्षीलाई पूज्ने कार्यले पशुपंक्षीको आफ्नो कामको सम्मान र महत्व झल्काउँछ । साथै मानव समाजसँगको सम्बन्ध र सम्पर्क प्रगाढ बनाउन मद्दत मिल्छ ।
यसले ईको सिस्टमलाई समेत सन्तुलित राख्छ । हामीले अरूको कामको कदर र गुणको पूजा गर्नुपर्छ चाहे ती आफूभन्दा साना वा पशुपंक्षी नै किन नहुन् । यो कुराको प्रष्ट सन्देश तिहारले दिन्छ । कसैले आफ्नो कामको सम्मान पाएन भने त्यहीबाट असमझदारी र असंतुष्टि बढ्छ । कलह र बिद्रोहको कारण पनि यहि हो ।
आफ्नो शरिर आफैँले पूजा गर्ने पर्व म्हः पूजाको मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि ठूलो महत्व छ । आफ्नो शरीर भन्दा बहुमुल्य कुरा यो संसारमा अरु केही पनि छैन । शरीर हाम्रो लागि सृष्टिको अनमोल उपहार हो।
शरिरका प्रणालीले काम गरुन्जेलसम्म मात्र हामी जिबित रहने हो । शारिर नै मन्दिर हो। यसलाई स्वस्थ्य राख्नुपर्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न तथा आफ्नै दिर्घायूको कामना समेत म्हः पूजामा गरिन्छ । यसले जीवन अमुल्य छ भन्ने बोध गराउछ ।
आत्म सम्मान कमजोर हुँदा मानिसलाई मानसिक असर पुग्न सक्छ । व्यक्तिमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरु देखिने गर्दछन् । मानसिक स्वास्थ्य सबल राख्न समेत म्हः पूजाले मद्दत पुर्‍याउने गर्छ ।
त्यसै गरि हाम्रो अर्को चाड भनेको प्रकृति र पर्यवरणको पुजा गर्ने चाड हो । यसले प्रकृति र पर्यावरण जोगाउनु पर्छ भन्ने संदेश दिन्छ ।
नोबेल पुरस्कार बिजेता कवि पाब्लो नेरूदाको कविता : बिस्तारै मर्दै जान्छौ
तिमी बिस्तारै मर्दै जान्छौ यदि तिमीले यात्रा गर्दैनौ भने यदि तिमीले पढ्दैनौ भने यदि तिमीले जिन्दगीका आवाजहरू सुन्दैनौ भने यदि...
के हो बेडसोर अर्थात् चाप घाउ ? यस्ता छन् डा. नीरन महर्जनका सुझावहरु
तरहरा कसरी नाम हुन गयो ? यस्तो छ तरहराको इतिहास, सभ्यताको उचाईमा फड्को मार्दै तरहरा
साहित्यमा विचार र कलाको बहस
स्वाब संकलन युनिट संयोजकको अनुभव : उच्च मनोबल र प्रशंसा भए जस्तोसुकै रोग परास्त गरिन्छ
ट्याक्टरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु
स्कुटी अनियन्त्रित भइ दुर्घटना हुदा एक जनाको मृत्यु
उर्लाबारी बाँस्तोला मृत्यु प्रकरण : फरार दुईजना पक्राउ, इन्स्पेक्टर जिल्ला तानिए
एम्बुलेन्सको ठक्करबाट सुनसरीकी एक महिलाको मृत्यु